Zinedine Zidane Oo Ku Fikiraya Badalka Dani Carvajal Ee Kulanka Finalka Champions League – Gool FM
Zinedine Zidane Oo Ku Fikiraya Badalka Dani Carvajal Ee Kulanka Finalka Champions League
(Real Md) 09 Maajo 2018adri. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay warbixin ku saabsan badalka macquulka ah ee tababare Zinedine Zidane hadii uu ku fashilmo Dani Carvajal inuu qeyb kasoo noqdo kulanka finalka Champions League ee ka dhici doono 26 May caasimada Kiev ee dalka Ukraine.
Zinedine Zidane ayaa wuxuu badal ku saaray kulankii Barcelona qeybtii labaad ee ciyaarta, si uu u ilaaliyo taam ahaanshihiisa, gaar ahaan ka dib markii uu ka soo laabtay dhaawac, wuxuuna doonayaa inuu noqdo badalka Carvajal.
Dhinaca kale “Marca” ayaa xaqiijiyay in macalinka reer France uusan ku fikiri doonin in Lucas Vázquez uu u adeegsado booska Dani Carvajal, sida uu horeyba ugu soo sameeyay kulankii lugta labaad ee kooxda Bayern Munich, laakiin xiligaas ayay Nacho iyo Carvajal ku maqnaayeen dhaawacyo kala duwan.
Dhinaca kale difaaca reer Spain ee Carvajal ayaa sheegay inuusan halis galin doonin dhaawaciisa, si uu qeyb kaga noqdo kulanka Liverpool ee Champions League, madaama uu eeganayo in uu xulkiisa Spain kala qeyb galo koobka aduunka ee 2018 ka bilaabmi doona bisha June dalka Russia.
Barcelona oo racfaan ka qaadanaysa ganaaxii lagu riday Sergi Roberto
Milan oo wada qorshe ay ku soo xero galineyso Radamel Falcao